Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo si faahfaahsan ugu xogwarantay dagaaladii ugu dambeeyay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo si faahfaahsan ugu xogwarantay dagaaladii ugu dambeeyay
Wararka naga soo gadhaya wadanka Ogadenia ee Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo badan oo dhacay intii u dhaxaysay 6-8 bisha kuwaas oo ay N/hurayaasha CWXO fuliyeen. Howl gaaldan oo isugu jiray dagaalo foolka fool ah iyo jid gooyooyin ay CWXO u dhigeen ciidamada cadawga ayaa ahaa dagaalo si qorshaysan loo fuliyay oo cadawga lagu riiqay, waxaana cadawga lagaga gubay ugu yaraan 5 gaadhi oo kuwa ciidanka qaada ah, halkaasoo ay ciidamada badan oon qiyaas lahayn ay ku basbeeleen. Warbixinadii nasoo gaadhay oo faahfaahsan ayaa u qornaa sidan;
6/12/13 Kalabaydhka oo dagmada Baabili katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay kolonyo baabuur ah oo uu cadawgu leeyahay waxaana goobta lagu gubay 1 baabuur oo isaga iyo wixii saaraaba ay islabasbeeleen.
6/12/13 Banbaas oo Baabili katirsan weerar gaadma ah oo ay CWXO ku qaadeen ciidamo uu gumaysigu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahinsiisa lahaynin.
Isla 6/12/13 Laanqayrta oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagaga gubay 1 baabuur oo kuwa ciidamada ah waxaana ku halaagsamay dhamaan ciidankii wayaanaha ee gaadhiga saaraa. Waxaa goobta uu dagaalka ka dhacay gurmad ku yimid maleesiyada uu gumaysigu adeegsado ee loo yaqaano hawaarinta hasa ahaatee inta hubkii laga dhigay ayaa jeelka loo taxaabay iyagoo lagu eedeeyay in ay xidhiidh laleeyihiin ciidamada JWXO.
6/12/13 Gadh-abeesaale oo Baabili udhaw dagaal foolka fool ah oo ku dhax maray CWXO iyo guwa gumaysiga oo deegaankaas falal budhcad nimo ah ka waday, waxaana goobtaas oo ciidamada cadawga loogu xoog sheegtay lagaga dilay 7 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/12/13 Duudciid oo Qabridahare udhaw waxay ciidamada qalabka sida ee Xoraynta Ogadenia ku gubeen 1 baabuur oo kuwa cadawga ah waxaana kubaaba’ay dhamaan wixii saaraa.
Isla 7/12/13 Labo-goorgudubka oo ka tirsan dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob kamiin ay kaxidheen CWXO waxaa soo galay kolanyo baabuur ah oo uu gumaysigu leeyahay waxaana goobta lagu gubay 1 baabuur oo kuwa cadawga ah.
8/12/13 Wiyilka oo tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan waxaa ciidamada cadawga lagaga gubay 1 baabuur oo nooca ay ciidanka cadawgu qaataan ah. Dhanka kale deegaanka Buqayso oo dagmada Dhagaxmadow udhaw dagaal kadhacay isla maalintaa waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Wararka aan ka helayno dadweynaha magaalada iyo tuulooyinka dagan waxay sheegayaan in maalinba maalinta kadanbaysa uu sii karaar qaadanaya dagaalada iyo howlgalada ay CWXO ku wiiqayaan cadawga, taasoo ay ku sheegeen in khasaare laxaadle loogu gaysto.